တရုတ် ဘဏ္ Finance ာရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များအတွက် ကြိုတင် ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည် - Pandaily
Nov 29, 2021, 12:24ညနေ 2021/12/06 16:36:36 Pandaily
မကြာသေးမီကတရုတ် ဘဏ္ Finance ာရေး ၀ န်ကြီး ဌာနက ထောက်ပံ့ငွေ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင်ချွေတာ ခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရေး ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင် ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၀န္ႀကီးဌာန သည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စြမ္းအင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္မ်ား အသုံးျပဳ ျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳ ျခင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရန္ပုံေငြ ႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စြမ္းအင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္မ်ား အသုံးျပဳ ျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳ ျခင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရန္ပုံေငြ ႀကိဳတင္ ထုတ္ေပး ျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ စြမ္းအင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္မ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရန္ပုံေငြ အျဖစ္ ယြမ္ ၃၈ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံ
ရန်ပုံ ငွေများကို ဒေသန္တရ ဌာန များသို့ ထုတ် ပြန်ပြီး ၂၀ ၂၂ ဘတ်ဂျက် နှစ် စတင် ပြီးနောက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များအရ စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သူ အသစ် များအား ခွဲဝေချထား ပေးလိမ့်မည်။
အရနယူး စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ မှ ထုတ်ပြန်သော “(၂၀၂၁-၂၀ ၃၅)” သည် ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များ၏ ထိုးဖောက် မှုနှုန်းသည် ၂၀% အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယခုနှစ် ပထမ ရှစ် လတွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များ၏ ထိုးဖောက် မှုသည် ၁၀% ကျော် ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:စက်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာနသည် စွမ်းအင် ယာဉ် စွမ်းအင် လဲလှယ် ရေး စနစ် အသစ် အတွက် ရှေ့ပြေး အစီအစဉ် ကိုစတင် ခဲ့သည်
မွတရုတ် ခရီးသည်တင် ကား အသင်းအောက်တိုဘာလတွင် စွမ်းအင် သုံး ခရီးသည်တင် ကား သစ် ၃၂ ၁၀၀၀ ကို လက်လီ ရောင်းချ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၄၁. ၁% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီ မှ အောက်တိုဘာ လအထိ စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် ၂. ၁၃၉ သန်းကို လက်လီ ရောင်းချ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁ ၉၁. ၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။
CPCA က တရုတ် စွမ်းအင် ယာဉ် လုပ်ငန်း သစ် သိသိသာသာ တိုးတက် လာကြောင်း အစီရင်ခံ
တရုတ် ခရီးသည်တင် ကား အသင်း (CPCA) မှ တနင်္လာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက် အသစ် များအရ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပြည်တွင်း ခရီးသည်တင် ကား လက်လီ ရောင်းချ မှုသည် ၂. ၀ ၉၂ သန်း ရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ် ကထက် ၄. ၄ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်။
Auto Feb 15 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2022
Changan Automobile Deep Blue အမှတ်တံဆိပ် ၏ပထမဆုံး မော်ဒယ်
Changan Automobile သည် SL03 ဟု လူသိများသော စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် အမှတ်တံဆိပ် Deep Blue ၏ပထမဆုံး မော်ဒယ်ကို တနင်္လာနေ့တွင် တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကား သစ် တွေကို ဇွန် လကုန် မှာ စတင် ရောင်းချ ဖို့ စီစဉ် ထားပါတယ်။